Siyaasiga Ismaaciil Buubaa oo diiday heshiiska dekadda Berbera – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASiyaasiga Ismaaciil Buubaa oo diiday heshiiska dekadda Berbera
Siyaasiga Ismaaciil Buubaa oo diiday heshiiska dekadda Berbera
Siyaasiga Ismaaciil Hurre Buubaa ayaa ka soo horjeestay heshiiska Maamulka Somaliland uu la galay sharikadda DPWorld ee laga leeyahay Imaaraadka iyo Dowladda Itoobiya oo saami laga siiyay maalgashiga Dekadda Berbera.
Ismaaciil Hurre Buubaa ayaa waxaa uu sheegay in Maamulka Somaliland ay qalad ku tahay in 30% kaliya ay Somaliland qaadato halka 70% ay la wareegtay Dowladda Imaaraadka iyo Dowladda Itoobiya.
Buubaa ayaa sheegay in Somaliland ay ahayd in ay qaadato ugu yaraan 51% taas oo u suuragelin karta in marka la kulmayo ay go’aanka iyada yeelato.
Xisbiga uu ka tirsanyahay ee Waddani ayuu sidoo kale sheegay in uu arrintan ka horyimid markii horena ay diideen,isaga oo sheegay in heshiiskii 1aad ee 65% DPworld uu markii horeba qalad ahaa.
Ismaaciil Buubaa ayaa sheegay in go’aanka Saamigaasi lagu siiyay Itoobiya iyo Imaaraadka ay tahay mid dhaawici karta dadaalka ay Somaliland ugu jirto in ay madaxbanaani ku gaarto.
Guddigii loo xilsaaray Qaraxii Soobe oo soo bandhigay waxqabadkoodii.
Maamulka Gobolka Banaadir Oo Shir Maanta Ka Furaya Magaalada Muqdisho
48,278 total views, 260 views today
48,278 total views, 260 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
48,350 total views, 260 views today
48,350 total views, 260 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
48,361 total views, 261 views today
48,361 total views, 261 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
48,382 total views, 260 views today
48,382 total views, 260 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
48,417 total views, 260 views today
48,417 total views, 260 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]